Qolka labiska kooxda Paris Saint-Germain oo qas weyn uu ka taaganyahay
Thursday, January 24th, 2019 - 10:13:23
Sunday January 14, 2018 - 08:01:57 in Wararka by Hussein Hadafow
Qolka labiska ee kooxda Paris Saint-Germain oo qas weyn uu ka taaganyahay iyadoo xidigaha kooxdaasina ay laba dhinac u kala Qeyb sameyn.
Paris Saint-Germain camp ahead of their Champions League round of 16 tie against Real Madrid with a rumoured bust-up between their South American stars.
Xidigaha kasoo jeeda Koonfurta America ee u kala dhashay Brazil, Argentina iyo Uruguay oo ah awooda ugu weyn oo ay ku tiirsantahay kooxda Paris Saint-Germain ayaa hada dhexdooda waxaa ka taagan xurguf aad u weyn.
L'Equipe ayaa ku warameysa in xidigaha kooxda PSG ay u qeybsaeyn laba qeybood oo ay kala hogaaminayaan Neymar iyo Edinson Cavani.
Labadan xidig oo la xusuuto inuu dagaalkoodu soo biloowday bishii September ee sanadkii hore ee 2017 xilligaas oo ay ku murmeyn Tuurida Gool kulaad ayaa hada weli u muuqada kuwa cadow isku ah oo aan is jecleyn.
Sida lagu qoray majaladda L'Equipe, ciyaaryahanada kala Neymar, Dani Alves, Thiago Silva, Lucas Moura iyo Marquinhos, oo u wada dhashay dalka Brazil ayaa u muuqada kuwa isbaheystay oo lid ku ah Edinson Cavani oo u dhashay dalka Uruguay oo isna gacan ka helaya , Ángel Di María, Javier Pastoreiyo Giovani Lo Celso oo u wada dhashay dalka Argentina.
Tababaraha kooxda Paris Saint-Germain Unai Emery ayaa hada ku jahwareersan xiisada ka taagan qolka labiska ee kooxdiisa oo sababtay in laba dhinac loo kala qeybsamo .